हामीले आफुमा कसरी सुधार ल्याउने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
प्रख्यात भनाइ नै छ, “सँसार परिवर्तन गर्नु छ भने, पहिले आफुबाट सुरू गर” । त्याे परिवर्तन, त्याे सुधारले हामीलाइ सफलता दिलाउँछ। र, आफुमा सुधार ल्याउन सक्याैँ भने, आफ्नाे जिवन राम्राे बनाउन सक्याैँ भने मात्र हामीले हाम्राे परिवार, हाम्राेृ समाजलाइ सुन्दर बनाउन सक्छाैँ ।
यसरी ल्याउन सकिन्छ आफुमा सुधार
जिवनका आफ्ना प्राथमिकताहरूलाइ छुट्याउनुहाेस् । तपाइ आफ्नाे जिवनमा के चाहनुहुन्छ, स्पष्ट भएर आफ्ना प्राथमिकताहरू तय गर्नुहाेस् । आफ्ना प्राथमिकता तथा लक्ष्यसँग सम्झाैँता नगर्नुहाेस् । भाग्यमा हाेइन कर्ममा विश्वास गर्नुहाेस् । तपाइले जे पाउनु भएकाे छ, जे पाउँदै हुनुहुन्छ र जे पाउनुहुनेछ, त्याे तपाइकाे कर्मकाे परिणाम हाे ।
सकारात्मक साेच राख्नुहाेस्, कडा मेहनत गर्नुहाेस् र आफुमाथि विश्वास राख्नुहाेस् । आफ्नाे प्रगति विवरण मुल्याङ्कन गर्ने बानी बसाल्नुहाेस् । यसाे गर्दा तपाइले आफुले समयकाे सदुपयाेग गरे/नगरेकाे, अवसरकाे सदुपयाेग गरे/नगरेकाे र अगाडी बढे/नबढेकाे थाहा पाउनुहुन्छ ।
जसले गर्दा तपाइले आफुमा सुधार ल्याउने चाहना राख्नुहुन्छ । कुरालाइ भन्दा बढी कामलाइ महत्व दिनुहाेस् । अनुत्पादनशील काममा कम समय खर्चिनुहाेस् । कसैलाइ भेट्नु छ भने, त्यही भेटकाे लागी दिनभर खर्चिनुपर्ने आवश्यकता हुदैँन । आजकल कतिपय कुरा फाेन मार्फत तथा इन्टरनेट मार्फत पनि हुन सक्छन् ।
भेट्नै पर्ने स्थितिमा आफ्नाे समयलाइ ख्याल राख्नुहाेस् । आफुलाइ अरूसँग नदाज्नुहाेस् । तपाइ जस्ताे हुनुहुन्छ, विशेष हुनुहुन्छ । आफुलाइ अरूसँग दाजेर घमण्डी बन्रे या निराश हुने आवश्यकता नै छैन । मात्र आफ्ना बलिया र कमजाेर पक्ष पत्ता लगाउनुहाेस् । ति कमजाेर पक्षलाइ कसरी सुधार्ने भन्रेतर्फ ध्यान दिनुहाेस् ।
आफ्नाे काम सकेसम्म आफै गर्ने गर्नुहाेस् । यसाे गर्दा तपाइमा जिम्मेवारी बाेध आउँछ, आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ र कामकाे अनुभव समेत हुन्छ । यसले तपाइलाइ अफ्ठ्यारा परिस्थितिसँग लड्न समेत सिकाउँछ । अरूलाइ सहयाेग गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस् । धन्यवाद, माफी जस्ता शब्दले आफु सानाे भइदैन, आफ्नाे व्याक्तित्व उजागर हुन्छ भन्रे मानशिकता बनाउनुहाेस् ।
किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहाेस् । किताबमा पढेका कुरालाइ आफुले विश्लेषण समेत गर्नुहाेस्, जसले गर्दा तपाइकाे साेच्न सक्ने क्षमतामा वृद्दि हुन्छ । त्यस्तै, आफ्नाे मनमा लागेका कुराहरू लेख्ने बानी गर्नुहाेस् । आफ्नाे व्याक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुहाेस् । स्वास्थ्य खाना, शारिरीक अभ्यास, दिनकाे समय तालिका आदिलाइ महत्व दिनुहाेस् ।
नकारात्मक साेच राख्ने, यत्तिकै समय खेर फाल्ने, अरूकाे कुरा काट्ने जस्ता व्याक्तिबाट टाढा रहनुहाेस् । आफ्नाे कामकाे क्षेत्रका मानिसहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुहाेस् ।
हरेक बालबालिकाको मनोविज्ञान र क्षमता अनि रुचि फरक-फरक स्तरको हुन्छ । सबै अभिभावक र विद्यालयको चाहना उस्तै हुन्छ । सबैले बराबर अंक प्राप्त गरून्, जुन असम्भव प्रायः हुन्छ । अर्कोतिर कक्षा १० मा पुगेका बालबालिकाको उमेरका कारण, शरीरमा हुने वृद्धि विकास, हर्मोनको कारण एवं मनोविज्ञान विल्कुल फरक तरिकाको हुन्छ । यो उमेरमा हुने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनले उनीहरूको ध्यान अध्ययनमा मात्र नजाने, मनमा अनेक सोचाइ आउने हुन सक्छ ।
छोराछोरी असल बनून्, ठूला मानिस बनून् भन्ने अभिभावकको चाहना नराम्रो पटक्कै होइन । सरसर्ति हेर्दा हामीले तर त्यसको लागि अभिभावकको भूमिका के हुनुपर्दछ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । घरको वातावरण शान्त, प्रेमपूर्ण, सहज हुनुपर्दछ ताकि परिवारका सदस्यबीच जुनसुकै कुरा अभिव्यक्त गर्न सकिने वातावारण होस् एकअर्कामा ।
घरमा परिवारबीच, आमा-बाबाबीच मनमुटाव भइराख्छ भने छोराछोरीले पढाइमा ध्यान दिन सक्दैनन् । आमाबाबाबीचको टकराव, मनमुटाव र झगडाले उनीहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ । छोराछोरीप्रति जुन अपेक्षा राखिएको छ, त्यो पूरा भएको देख्न, उनीहरूका सबै कुरा बुझेर आफ्नो व्यवहार सकारात्मक बनाउनुपर्दछ अभिभावकले ।
वातावरण र परिस्थिति सहज बनाउँदै वर्तमानमै सुखी र खुसी पारिवारिक जीवन बिताउन चाहेका छौं कि अहिले तनाव लिएर भविष्य खुसी बनाउने निर्णय गरेका छौं, त्यता ध्यान पुर्‌याउन नसकेको हो कि ? वर्तमान समेट्न नसक्दा भविष्यका सपनाले दिएका कष्टकर अनुभूति समाजमा नसुनिने होइनन् र पनि सन्तुलनको जीवन, सन्तुलनको पारिवारिक भूमिका र छोराछोरीप्रतिको सपना र अपेक्षा सन्तुलित नभएर पछुताउने अभिभावकको कमी पनि छैन यहाँ ।
छोराछोरीको इच्छा र क्षमताअनुसार आफ्नो करियर निर्धारण गरून् भन्ने अभिभावकभन्दा आफूले पूरा गर्न नसकेका सपना छोराछोरीले पूरा गरिदिऊन् भन्ने चाहना रहेको धेरै अभिभावकबाट सुन्न पाइन्छ । आफ्ना सपना र अपेक्षाअनुसार छोराछोरी बनून् भन्नको लागि घरबाटै शिक्षा, संस्कार र व्यवहार सिकाइएको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
हामी छोराछोरीको सिर्जनात्मक क्षमताको पनि तारिफ गर्दछौं कि नतिजा र प्रतिशत धेरै खोज्छौं ? हामी नतिजालाई मात्र ध्यान दिने कि छोराछोरीको साथीसंगत र विद्यालयले दिइने शैक्षिक वातावरण पनि कस्तो छ भनेर बेलैमा ध्यान दिने गर्दछौं ? आफ्ना छोराछोरीले राम्रो अंक ल्याउँदा विद्यालय राम्रो भन्ने र आफ्ना छोराछोरीले राम्रो अंक ल्याउन नसक्दा विद्यालयलाई दोष दिने गरेका त छैनौं ? आफ्ना छोराछोरीको मनोविज्ञान नबुझी अरूका छोराछोरी र उनीहरूका साथीसँग तुलना गर्ने र नजानिँदो तरिकाले आफ्नै छोराछोरी हेप्ने काम त गरेका छैनौं ? किताबी शिक्षा मात्र शिक्षा होइन, नैतिक शिक्षामा हामीले ख्याल गरेका छौं कि छैनौं ?
आफ्ना छोराछोरीमा आत्मबलको कमी छ कि साहसी छन् ? अनुशासनको कमी छ कि ? खराब बानीहरूको विकास पो भएको छ कि ? झूटो बोल्ने बानीको विकास भएको छ कि ? अध्ययनमा रुचि घटेको छ भने के कारणले ? यस्ता कुरामा अभिभावकले बेलैमा होस पुर्‌याउनुपर्ने हुन्छ ।
ती सबै कुरा कम गरेर पढाइमा बढी समय दिऊन् जस्तो लाग्छ भने आफूले समय दिएर सकारात्मक तरिकाले दिनभर उनीहरूका क्रियाकलापबारे बुझेर आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । विद्यालयले आयोजना गरेका कार्यक्रममा उपस्थित हुने, आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइमा मात्र होइन, अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि भाग लिन हौसला प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ ।
१० कक्षामा पुगेका छोराछोरी रिसाए भने त्यो बेला तत्काल प्रतिक्रिया नदिने र उनीहरूलाई शान्त हुने मौका दिनुपर्दछ । राम्रा-राम्रा शिक्षावद्र्धक पुस्तकहरू किनेर पढ्न दिने । उनीहरूको सन्तुलित खानपान र सरसफाइ अनि साथीसंगतको बारेमा ध्यान दिने गरियो भने छोराछोरी खराब मार्गमा जानै सक्दैनन् । छोराछोरीको मात्र होइन, अभिभावकको मनोविज्ञान पनि सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।
हाम्रो स्वभाव कस्तो छ, हामी कस्तो व्यवहार गर्छौं भन्ने कुरा हाम्रो आहार, आचार र विचारले निर्धारण गर्दछ । हामीजस्तो खाना (आहार) लिन्छौं, त्यस्तै रगत बन्छ र त्यस्तै विचार उत्पन्न हुन्छ, तिनै विचारको परिणाम हाम्रो स्वभाव बन्छ । हामीले नचाहँदा-नचाहँदै पनि छोराछोरीप्रति दुःख पुर्‌याइरहेका हुन्छौं, नजानिँदो तरिकाले उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर पुर्‌याइरहेका हुन्छौं भने त्यसमा हाम्रो आहार, आचार र विचारले पारेको असर हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
विचारले स्वभाव निर्धारण गर्दछ र त्यसैअनुसारको व्यवहार अभिभावकले छोराछोरीसँग र छोराछोरीले अभिभावकसँग प्रस्तुत गर्छन् ।त्यस्तै साथीहरूसँग रिसाउने, झर्कने, कसैले भनेको कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने, शिक्षकसँग मुखमुखै लाग्ने, तुरुन्तै जवाफ फर्काउने स्वभाव पनि विचारका परिणाम हुन् । छोराछोरीले पहिलो संस्कार अभिभावकबाटै सिकेका हुन्छन् ।
त्यसैले उचित खानपान, योग, ध्यान, अनुशासन छोराछोरी र अभिभावक दुवैमा जरुरी छ । उनीहरूको लवाइ, खुवाइ, बोल्ने भाषा, चालचलन र अनुशासन घरको व्यवहारले प्रभाव पर्ने हुँदा घरबाट यी कुरा ख्याल गरिनुपर्दछ । सकारात्मक सोच, शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान र सन्तुलित भोजनले मन प्रफुल्ल हुन्छ, शान्त हुन्छ र शान्त मनले पढाइलाई सहयोग गर्दछ । त्यसैले यी कुरामा अभिभावकले ध्यान दिनैपर्दछ ।
Don't Miss it कस्ता हुन्छन् विषालु च्याउ ? विषालु च्याउबाट बच्ने उत्तम उपायहरू यस्ता छन् जान्रुहाेस्
पित्ताशयको रेखदेख गर्न यस्ताे खानपान गर्नुपर्छ, जानकारीका लागि पढ्नुहोस् र पढाउँनुहोस्